२०७५ बैशाख २२ शनिबार ०७:००:००
३० को दशकदेखि जनताका दुःख–पीडा गाउँदै हिँडेका जीवन शर्माको मन यतिबेला खुशीले आह्लादित हुनुपर्ने हो । कारण— उनैका गीत सुनेर ‘कम्युनिस्ट’ बनेका कतिपयले सत्ताको डाडुपन्यु समाएका छन् । तर, झनै निराश छन् उनी ।
झरनाको चिसो पानी...!’
रक्तिमले निकालेका सबैजसो गीतको रचना उनी स्वयंले गरेका छन् । त्यसबाहेक मणि थापाले रचना गरेका गीत गाएका छन् उनले । थापा रचित ‘फोकल्यान्डको टापुबाट...’ भन्ने गीत असाध्यै रुचाइयो । अर्जेन्टिनाअधीनस्थ फोकल्यान्ड टापु गोर्खा सैनिकको सहयोगमा बेलायतले सन् १९८२ मा कब्जा जमाएको थियो । त्यही लडाइँमा सामेल गोर्खालीको सम्झनामा रचिएको गीत हो– ‘फोकल्यान्डको टापुबाट...’ ।
“बाजेको सेकुवाको साइन बोर्ड झुन्ड्याउँदै के सबै ठाउँ बाजेकै सेकुवा भइहाल्छ ? त्यस्तै हुन् नेपालका कम्युनिस्ट– साइनबोर्डधारी ! यिनीहरूसँग कम्युनिस्ट झन्डाको चित्र छ तर प्रगतिशील चरित्र छैन ! यिनीहरूबाट हाम्रा अधुरा सपना किमार्थ पूरा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “परिवर्तनको मोहमा भौतिक सुख– सुविधा त्यागेर हिँडेको मान्छे । मेरो जीवनकालमा भन्न सक्दिनँ तर ढिलोचाँडो क्रान्तिको आँधी आएरै छाड्छ ! यसकारण कि परिवर्तन शाश्वत् सत्य हो ! ०३५–३६ को आन्दोलन, ०४६ सालमा पञ्चायत पतन, ०६२–६३ मा राजसंस्थाको अन्त्य, गणतन्त्र घोषणा हाम्रो चाहनामा मात्रै भएका हुन् त ? अतः समयसँगै हुन्छ परिवर्तनको हुरी !” यति भनेर उनी आफू हिँड्दै आएको बाटो हिँडे । जागरणको बाटो ।
(तस्बिर : शर्माको फेसबुकबाट)